Na eo aza ny COVID-19, tsy mitsahatra ireo famoretana ny zon’olombelona ao Egypta · Global Voices teny Malagasy
Hodian-tsy hita ireo antso avo ho famotsorana gadra pôlitika an'arivony.
Voadika ny 29 Avrily 2020 20:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, عربي, Français, বাংলা, Nederlands, русский, English
Alaa Abd El Fattah, mandray fitenenana tamin'ny Personal Democracy Forum, 2011. Sary an'ny PDF tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0).
Anivon'ny valanaretina maneran-tany COVID-19, tandindonin-doza anatin'ireo fonja hipoka ao amin'ny firenena ireo Egyptianina mpikatroka mafana fo, mpiaro ny zon'olombelona.
Betsaka ireo antso avo natao hamotsorana ireo mpiaro ny zon'olombelona voafonja no tsy noraharahiana. Mandritra izany fotoana izany, nanao fitokonana tsy hihinan-kanina ny bilaogera malaza sady mpikatroka mafana fo ho an'ny zon'olombelona Alaa Abd El Fattah, fantatra amin'ny anarana hoe “Alaa” anatin'ny vondrompiarahamonina misy azy, raha mbola mitohy kosa ny fisamborana sy ny fihazonana.
Amin'izao fotoana izao, mitokona tsy mety mihinan-kanina i Alla ho fanoherany ny fitohizan'ny famonjàna azy, hoy ny fianakaviany tanatinà fanambaràna natao ny 22 Aprily.
Araka ny voalaza tanatin'ilay fanambaràna, ny 13 Aprily, naharay tatitra avy amin'ny Tora Maximum Security Prison izay hitanana an'i Alaa ny biraon'ny mpampanoa lalàna fa nanomboka ny fitokonany tsy hihinan-kanina izy.
Ny 22 Aprily, afaka nahazo tatitra vaovao hafa momba ny fahasalaman'i Alaa sy ny fitokonany tsy hihinan-kanina ny fianakaviany:
Androany izahay dia afaka nijery ilay tatitry ny mpitsabo tamin'ny 18 Aprily 2020, izay milaza fa 54 mg/dL [miligrama isaky ny desilitatra] ny fatran'ny siramamy tao anatin'ny ràn'i Alaa, teo amin'ny 76 kosa ny fitepon'ny fony, 100/70 ny tosidràny, ary nandà ny hampiatoana ny fampidirana glucose izy.
Voamarin'ity tatitra ity fa manao fitokonana tsy hihinan-kanina tanteraka i Alaa, izay mifanohitra amin'ilay tatitra teo aloha nilaza fa mandray ranon-tsakafo fotsiny ihany izy, hoy ny voasoratr'i Mona Seif, anabaviny.
Nivoaka sy niditra ny fonja io mpikatroka mafana fo malaza io nanomboka tamin'ny 2011. Tamin'io taona io, voatàna an-tranomaizina nandritra ny roa volana izy, tsy nahatratra ny fahaterahan'ny zanany voalohany, Khaled. Tamin'ny 2013, nosamborina sy notanana nandritra ny 115 andro tsy nisy fitsaràna izy.
Nosamborina sy nalaina tao amin'ny tranom-pianakaviany i Alaa ny Novambra 2013. Herintaona mahery tato aoriana, ny Febroary 2015, notsaraina ihany izy ary voampanga hifonja mandritra ny dimy taona teo ambany lalàna tamin'ny 2013 izay mandrara ireo fihetsiketsehana tsy nahazoana alàlana, noho ny “fikarakaràny” hetsipanoherana enti-manohitra ireo fitsaràna miaramila. Raha toaka tena nandray anjara tanatin'ilay hetsipanoherana natao ny 26 Novambra 2013 tokoa izy, tsy nandray anjara tanatin'ny fikarakaràna izany velively kosa anefa.
Navoaka ny fonja izy ny 28 Martsa 2019. Kanefa fahafahana narahina fepetra ny azy satria tsy maintsy nohidiana tao amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana nisy azy izy manomboka amin'ny 6 ora hariva ka hatramin'ny 6 ora maraina miaraka aminà fe-potoana fizahan-toetra maharitra dimy taona. Imbetsaka naneho ny heviny manohitra ity famotsorana arahina fepetra ity izy — izay nofaritany ho “fanalambaraka”.
Saingy na ny silam-pahafahany aza dia tsy naharitra.
Nisambotra azy indray ireo manampahefana ny 29 Septambra 2019, nandritranà famoretana hetsipanoherana tsy mahazatra enti-manohitra ny governemanta hatramin'ilay fanonganam-panjakana izay nanongana ny filoha voafidim-bahoaka Mohamed Morsi, izay nodimandry raha izy mbola voatana am-ponja ny 17 Jona 2019. Tsy nandray anjara tanatin'ireny hetsipanoherana ireny i Alaa, nefa dia mbola voasambotra indray. Ny alin'ny nisamborana azy, “notapenan'ireo mpiasan'ny fonja ny masony, nesorin-izy ireo ny akanjony, nodarihany sy nodakadakany imbetsaka izy, ary norahonan'ireto farany sy nanaovany herisetra am-bava,” hoy ny Amnesty International.
Nosamborina ny harivarivan'io andro io ihany koa ny mpisolovavany, Mohammed el-Baqer, mpiaro ny zon'olombelona, rehefa niseho tao amin'ny Supreme State Security Prosecution (SSSP) hisolo tena azy. Niharan'ny fitondràna tsy mendrika ihany koa izy.
Samy voatana anatin'ny raharaha mitovy izy roa noho ny fiampangàna tsy marina azy ireo ho “manaparitaka vaovao tsy marina,” “niditra tanatinà fikambanana tsy ara-dalàna,” “mandray famatsiana avy any ivelany,” sy “mampiasa ny tambajotra sosialy amin'ny tsy tokony ho izy.”
Tamin'ny 20 Febroary 2020 no nanavaozana farany ny fitànana azy ireo hiampy 45 andro, noho ny fangatahan'ny fampanoavana. Nanomboka teo, notànana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ry zareo rehefa tapitra ilay 45 andr ka tsy nisy fanavaozana ny fihazonana azy intsony.
“Hatramin'ny nanekena ny fampiakaran'ny fampanoavana ny fitsaràna hanavaozana ny fitanana azy tamin'ny 20 Febroary 2020, tsy nanatrika fakàna am-bavany hafa intsony i Alaa, izay nahatonga ny fitanana azy mitohy, sy ny an'ireo hafa miaraka aminy, tsy ara-dalàna”, hoy ny fianakaviany, izay nanampy fa:
Tsy manafoana ny zon'ireo voatana am-ponja vonjimaika ny toejavatra tsy ampoizina, na hatao ho alaolana hanesorana aminy ny zony hiaro tena sy haka mpisolovava.
Tsy misy fitsaharana amin'ny famoretana
Na eo aza ny valanaretina COVID-19, tsy nampiseho fambaranà fitsaharana mihitsy ny famoretana ireo gadra ara-pôlitika ao Egypta. Na dia namoaka gadra vitsivitsy aza ireo manampahefana —ahitàna mpanao pôlitika sy mpikatroka mafana fo 15—tanatin'ny fepetra hifehezana ny fihanaky ny tsikomaretina, an'aliny ireo mbola tafajanona ao am-ponja noho ny fampiharany ampilaminana ny zony haneho hevitra malalaka, hanohitra ary hivondrona.
Hatramin'ny 26 Aprily, nirakitra tranganà COVID-19 4.534 sy fahafatesana 317 ny firenena, araka ny voalazan'ireo mpitondra teny ofisialy. Hipoka ireo fonja ao ary tsy ampy fahadiovana, miteraka ahiahy goavana amin'ny mety hiparitahan'ny aretina anatin'ireo toepiainana ireo.
Anatinà hetsipanentanana ho famoahana voafonja an'arivony, nibitsika izao manaraka izao ny Ivontoerana ho an'ireo Fianarana momba ny Zon'Olombelona ao Caire ny 14 Aprily:
Egypta: Raha mametraka ny tsy fahazoan-dàlana mivezivezy amin'ny alina ny governemanta Egyptianina, mbola manohy minia tsy mijery ireo fonja am-polony hipoka ao amin'ny firenena kosa izy, izay raha araka ny tatitra dia efa mihoatra ny 300 % an'izay fetra zakany!!
Soniavo ny fanangonantsonia eto: https://t.co/xvIpm54vYJ
Kanefa, na teo aza ireo antso avo maro ho famoahana ireo gadra ara-pôlitika, mbola mitohy foana ireo fitànana sy fisamborana. Ny 20 Aprily, nosamborina i Wael Abbas raha naka sary tao Wadi Degla, tahiry voajanahary any amin'ny 35 kilaometatra atsimon'ny renivohitra, Caire. Naka sary ho an'ny pejy Facebook-ny, Planet Egypt 360, izay hanomezany fitsidihana virtoaly an'ireo toerana manintona mpizahatany ao egypta i Abbas. Navotsotra izy ora maro tato aoriana.
Tamin'ny 2018, nifonja nandritra ny volana maro i Abbas noho ireo fanamelohana namboamboarina izay nahitàna ny “fanaparitahana vaovao tsy marina,” “fifandraisana aminà vondrona mpampihorohoro,” ary “fampiasàna tsy araka ny tokony ho izy ny tambajotra sosialy.”
“Nampijaliana sy nahilikilika aho satria mpikatroka mafana fo ara-pôlitika teo aloha, na dia efa nanajanona ny fikatrohako aza aho,” hoy izy tanatinà lahatsorata Facebook momba ny fisamborana azy farany indrindra.
An'arivony ireo olona voafonja noho ny fampihazany milamina ny zony ara-pôlitika sy amin'ny maha olompirenena azy eo ambanin'ny fanjakan'ny filoha mpanao didy jadona Abdelfattah Sisi, izay nitarika ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 2013 fony izy lehiben'ny tafika sy minisitry ny fiarovana, talohan'ny nakàny ny toeran'ny filoham-pirenena tanatinà fifidianana izay tsy nanaraka ny fepetra iraisam-pirenena,
Ireo voasambotra noho ny fanamelohana ara-pôlitika dia matetika iharan'ny fanjavonana an-katerena, fampijaliana, fanitarana ny fitanana alohan'ny fitsaràna sy fanagadrana mitokana. Na eo ambany krizy ara-pahasalamana toy ny COVID-19 aza, dia mbola mitohy ny sedran'ireo voafonja ireo, izay tsy tokony ho voafonja mihitsy raha ny tena marina.
Fantaro ireo fiantraikany ara-tsaina ateraky ny fitokonana tsy hihinan-kanina miaraka amin'ny sarisary eto ambany, noforonin'ny mpiara-miasa amin'ny Global Voices, Visualizing Impact: